Wasiirka Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo ka hadlay macalimiin ay qaadanayso wasaarada wax barshada – Daily Som
Wasiirka Waxbarashada iyo Tacliinta sare, Mudane Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan, ayaa ka war bixiyay macalimiin ay wasaaraddu u qaadaneyso dugsiyada dhexe iyo sare dalka si sare loogu qaado heerka waxbarashada dalka.
Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in miisaaniyadda waxbarashada dalka sare loo qaaday sidaas darteed ay wasaraddu go’aansatay in macalimiin ay mushaarkooda bixineyso dowladdu loo shaqaaleysiiyo iskuulaadka dalka.
Mudane Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan ayaa waxa uu sheegay in wasaaradiisu ay diyaarisay shuruucdii lagu qaadan lahaa macalimiintaas kadibna la xayeysiiyay si loogu tartamo hab cadaalad ah, isaga oo intaa raaciyay in ay soo codsadeen 761 macalim hase yeeshee 325 kamid ah ay buuxiyeen shuruudihii imtixaanka looga qeyb gali lahaa.
Macalimiintaan oo laga qaadayo imtixaan si loo hubiyo aqoontooda ayaa waxa la doonayaa in ay kasoo baxaan 300 oo macalim kuwaas oo ka shaqeyn doona iskuulaadsa dhexe iyo sare ee Gobalka Banaadir, Hir-shabeelle, Jubbaland, Gal-mudug iyo Koofur Galbeed.
Afarta maamul gobaleed ee kala ah Hir-shabeelle, Jubbaland, Gal-mudug iyo Koofur Galbeed ayaa midkiiba waxaa macalimiinta uga soo aadaya 50, halka gobalka Banaadir uu yeelanayo 100 macallim
Wasiirka Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo ka hadlay macalimiin ay qaadanayso wasaarada wax barshada added by Staff on May 14, 2018